Zidane oo ka hadlay xaalada Gareth Bale iyo fursada uu Mbappé ku imaan karo Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 05 Nof 2019. Macalinka reer France iyo kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay habeen dambe kula ciyaari doonaan Galatasaray tartanka Champions League.
Zidane ayaa ka hadlay dhowr arrimood ee quseeya kooxdiisa Real Madrid, waxaana ugu muhiimsanaa waxyaabihii uu ka hadlay dhibaatada Gareth Bale iyo suurtogalnimada uu Kylian Mbappé.
Real Madrid ayaa habeen dambe ku soo dhaweyn doonto garoonkeeda Santiago Bernabeu, si ay u wada ciyaaraan kulankooda 4-aad GROUP A ee tartanka Champions League xilli ciyaareedkan.
Zinedine Zidane oo dhowr arrimood ka hadlay ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waan ognahay mas’uuliyadeena berri, waxaan isku dayi doonaa inaan soo bandhigno kulan weyn, waxaan heysanaa xamaasada ciyaarta, sida dhamaan kulamada aan garoonkeena ku ciyaarno”.
Waxaan u baahanahay taageerayaasheena, sidoo kale ciyaartoyda, uma maleynayo inay dhamaad tahay iyo inkale, laakiin sida ugu fudud waa inaan barri soo bandhigno kulan fiican”.
“Waxay sheegeen inaan doonayo in Gareth Bale uu baxo bisha Janaayo, waa wax lagu qoslo, waxaan doonayaa in Bale uu halkaan sii joogo ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka”.
Intaas kaddib Zinedine Zidane ayaa wuxuu ka hadlay wararka Real Madrid lala xiriirinyo Kylian Mbappé wuxuuna yiri:
“Isaga ayaa go’aamin doono mustaqbalkiisa, hadda wuxuu joogaa Paris waana arki doonaa waxa dhaca mustaqbalka, Mbappé wuxuu xilli kasta sheegaa in riyadiisa ay tahay inuu maalin uun ka ciyaaro Real Madrid”.
Waa kee macalinka uu Lothar Matthäus kaga digay Bayern Munich inay la saxiixato?... (Wenger, Mourinho iyo Allegri)
Lionel Messi oo ka warbixiyay faa'iidooyinka Frenkie de Jong kaddib imaatinkiisa Barcelona